Ra’iisal wasaare Ardugan oo la filayo in uu booqdo marinka Gaza – SBC
Ra’iisal wasaare Ardugan oo la filayo in uu booqdo marinka Gaza
Istanbul:-Ra’iisal wasaaraha Turkiga Rajab Dayib Ardugaan ayaa sheegay in uu booqasho ku tagi doono laba toddobaad gudahood marinka Gaza ee ay maamusho xarakada Xamaas, xilli Israel ay ka digayso in booqashadan ay wax yeelayso xiriirka ay la leedahay xukuumadda Turkiga.
Warbaahinta Israel ayaa sheegtay in Ardugaan uu weydiistay maamulka Masar in loo ogolaado in uu gaaro marinka Gaza inta uu ku guda jiro booqasho la filayo in uu ku tago Masar dabayaaqada bishan July balse maamulka masar ayaanan wax jawaab ah ka bixin dalabka Ardugaan.
Dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Axmed Daa’uud Ogloow ayaa ugu baaqay xukuumadda Israel in ay cudur daar rasmi ah ka bixiso islamarkaana magdhow ka siiso ehelada dadkii ku dhintay doonidii u socotay Marinka Gaza oo ay ciidamada Israel weerareen sanaddii la soo dhaafay.
Laamaha amaanka Israel ayaa taageersan in Israel ka raaligeliso turkiga dhacdadii doontii gar-gaarka u siday marinka Gaza si loo soo afjaro khilaafka u dhexeeya Israel iyo Turkiga islamarkaana laga fogaado dacwad kadhan ah saraakiisha Israel oo ay la tiigsadaan ururo turki ah.
Wasiirka arrimaha dibadda Yuhuuda ninka lagu magacaabo Afigdoor Lieberman ayaa ku eedeeyey ra’iisal wasaaraha tukiga in uu ka hor joogsaday Israel heshiis ay lagasho dalal kale maadaama uu ku adkeestay in Israel ay soo afjarto xayiraadda ay ku hayso marinka Gaza.